Yenza igrafu esebenzayo ngokusebenzisa imigaqo-siseko esisiseko emi-4 | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukuze ukwazi ukwenza ezinye intengiso ngokuchanekileyo, kubalulekile ukunika ingqwalaselo eyimfuneko kwizinto eziyenzayo, indibaniselwano yazo zonke ezi kunye nobungcali bomyili ophetheyo, oku kuyakusivumela ukuba sibe Isixhobo esithengiswayo.
Okulandelayo siza kukuxelela ezinye zezinto eziya kuthi zichonge impumelelo enokuthi ibekho nakubani na ofuna ukuba nayo umvelisi wemizobo.
1 Iimpawu zokuba ngumvelisi wemizobo
1.2 Inkxaso kunye nokugqitywa kwayo
1.3 Umxholo woncwadi
2 Singachaza ukuba kufuneka silandele ezi ngcebiso zilandelayo:
Iimpawu zokuba ngumvelisi wemizobo
Ngaphambi kokuba uqale ukwenza naluphi na uyilo, kubalulekile yenza ulwakhiwo olunengqiqo, ekufuneka inyuselwe Ukucaca kunye nokufundeka eya kuba nolwazi oceba ukulubeka kuyilo. Kodwa umbutho wabo uya kuxhomekeka kumxholo ngokwawo, kwinkxaso esiza kuzifumana sikuyo.
Inkxaso kunye nokugqitywa kwayo
Njengoko kufanele ukuba sazi, ngaphambi kokumilisela nawuphi na umyalezo wentengiso, kufuneka chaza ngokucacileyo imithombo yeendaba okanye inkxaso Esiza kuphumelela ngayo xa sizazisa.
Ngeli xesha amathandabuzo kunye nemibuzo ziqala ukuvela Ngaba imveliso yethu iya kuba ngaphandle kweintanethi okanye iya kuba kwi-Intanethi? Ngaba ukushicilelwa kwethu kuya kwenziwa ephepheni okanye kwinkxaso esisigxina? Ngaba iprojekthi yethu eprintiweyo izakufa okanye ngaba siza kubeka ivanishi kuyo? Kuxhomekeka kwiinjongo, umxholo onqwenelekayo, abaphulaphuli abaziintloko kunye nokunye okuninzi, siya kukhetha inkxaso, eya kuthi misela impumelelo yezinto zethu kwintengiso.
Zininzi izixhasi kunye nokugqitywa kwaye zininzi izinto apho ukhetho lwethu luya kuxhomekeka khona.
Ikopi eyenziwe ngokuchanekileyo kakhulu ibalulekile kwimpumelelo yawo nawuphi na umyalezo Esifuna ukuyibeka, nangona oku kubalulekile ngokubaluleka kwimiyalezo nakwizihloko zeemveliso ezithile zentengiso, ngokubanzi, kuyo nayiphi na into yoyilo, izicatshulwa ezahlukeneyo ukuze zingachaneki kuphela ukusuka kwindawo yopelo, kodwa kwanokuba ziqiniseke kwaye zilungele abaphulaphuli bethu, oko kukuthi, kufuneka zichaze kwaye ziqondakale.
Ukuba asinamava esinakho ukukwenza bhala izicatshulwa eziyilwe kakuhle, kufuneka sifune uncedo lwe umbhali oyingcali ukusinceda ngendlela elungileyo. Kuya kufuneka sazi ukuba uninzi lweearhente zobuchwephesha nazo zinenani lekopi kumaqela abo.
Akukho kukhanyela amandla kunye nefuthe lomfanekiso olungileyo, kunjalo ke kubalulekile ukuxhasa imiyalezo ebhaliweyo Ngomfanekiso owomeleleyo nolungileyo, kufuneka ube nomgangatho olunge kakhulu, kungekuphela komxholo wegraphic kodwa nobukhulu Ukuba uhlahlo-lwabiwo mali luyakuvumela oko, luyasebenza sebenzisa imifanekiso efanelekileyo Ukuba zenziwa yingcali, ziya kubonelela ngentengiso ngobuntu kunye nenyani.
Ukuba Imveliso yeefoto akwenzeki, zininzi Iibhanki zemifanekiso engenasimahla, apho ngexabiso eliphantsi sinokufumana iindlela ezahlukeneyo, kodwa kuya kufuneka silumke ngolu khetho, kuba ukuba sisebenzisa gadalala iifowuni imifanekiso eqhelekileyo, Singenza uyilo lubonakale lungelolwakho kwaye lupholile.
Kule mizuzu izakubaluleka Khetha umyili ukwenza le projekthi.
Njengengcebiso yobungcali, sicebisa ukuba uhambe ngenyawo lasekunene kwaye usebenze kunye Umxholo wemizobo, ulwakhiwo kunye nomxholo olungileyo wokubhala Kwaye ukuba awuziva wonwabile malunga nokwenza ngokwakho, unokufuna uncedo lweengcali ezinokukunika isandla kwimeko nganye kwezi.
Singachaza ukuba kufuneka silandele ezi ngcebiso zilandelayo:
Kuya kufuneka siphuhlise ulwakhiwo olunengqiqo ixesha elide ngaphambi kokuba siqale ukwenza naluphi na uhlobo loyilo.
Impumelelo yento yokuthengisa ekufuneka ijongiwe kufuneka igqitywe yi Ukukhetha eliphakathi.
Iseti yeetekisi ezenza isiqwenga sokuyila kuthiwa ikopi kwaye kubalulekile kumxholo wethu woncwadi.
Kusenokwenzeka ukutsala umdla woluntu kwaye ufunde wonke umxholo ukuba ubeka umfanekiso onefuthe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Yenza itshathi esebenzayo ngemigaqo esisiseko emi-4
Ukufota ngesiphumo sephupha kwi-Photoshop enesiphumo esinomtsalane
Umkhwa wokubonakalayo: Umyalezo ophambi kobuhle